Bile Mohamed – Page 2 – Shabakadda Somalibile Media
Guddoomiye hore oo iska diiday in mar kale loo magacaabo gobolka Banaadir.
Warar lagu kalsoonaan karo oo aan helnay ayaa waxay sheegayaan in madaxweyn Farmaajo iyo Ra’iisul wasaare Kheyre usoo bandhigeen Xasan Xuseen Muungaab in markale uu noqdo guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho. Ilo ku dhow Muungaab ayaa la sheegay inuu iska diiday arrintaasi, iyadoo aan la ogeyn weli sababta uu isaga diiday qabashada xilkan. Muungaab ayaa horey usoo noqday duqa ...
Madaxweynaha Jubaland oo qaabilay wafdi kasocday beesha Caalamka iyo natiijadda kullanka.
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa Xarunta Madaxtooyada ku qaabilay wafdi kasocday Beesha Caalamka oo uu hogaaminayay Wakiilka Qaramada Midoobay ee Soomaaliya James Swan waxaa kale oo wafdiga kamid ahaa xubno kasocday IGAD, Safiirka Midowga Afrika ee Soomaaliya, Taliyaha guud ee Amisom iyo xubno kale. Dhinaca Jubbaland waxaa Madaxweynaha ku wehelinayay kulankan Madaxweyne ku xigeenada iyo Wasiirada Arimaha ...
Warsaxaafadeed lagu taageeray xildhibaanada cusub ee Jubaland oo ka soo baxay xisbiga wadajir.
Xisbiga wadajir oo ka mid ah xisbiyada mucaaradka ayaa maanta soo saaray warsaxaafaeed kaasoo lagu taageeray xildhibaanada cusub ee maamulka Jubaland isla markaana la dhaariyey. HALKA HOOSE KA AKHRISO WAR-SAXAAFADEEDKA OO DHAMEESTIRAN.
Kismaayo oo lagu dhaariyey xildhibaanadda cusub ee maamulka Jubaland.
Waxaa Maanta lagu qabtay munaasabad lagu dhaariyay Xildhibaannada Cusub ee Baarlamaanka Jubbaland Magalada Kismaayo ee Xarunta Gobolka Jubabda Hoose, kuwaas oo 73 ka mid ah xalay ay ku dhawaaqeen Guddiga doorashooyinka Jubbaland. Waxaa goobjoog ka ah Xafladda dhaarinta Baarlamanka 2aad ee Dowlad Goboleedka Jubbaland Xildhibano ka tirsan Labada Aqal, ee Baarlamanka federalka Soomaaliya, Odoyaasha Dhaqanka Jubbaland ee soo Xulay xildhibaannada, ...
Boqolaal ka mid ah amniyaadka Al-shabaab oo gudaha u galay Muqdisho iyo cabsi jirta.
Warar lagu kalsoonaan karo oo aan ka helnay ilo madax bannaan kuna sugan magaalada Muqdisho ayaa inoo sheegay inay saacadihii la soo dhaafay magaalada soo gaareen boqolaal ka tirsan Al-shabaab gaar ahaan qolyaha Amniyaadka ee dadka bastooladaha ku dila. Qof ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda kana gaabsaday in magaciisa lala wadaago shabakadda somalibile.com ayaa sheegay in ku dhawaad 130 ...
DAAWO: Warbixin ku saabsan weerar lagu qaaday masjid ku yaala xaafadda Bærum ee dalka Norway.
Iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyey wadamada reer galbeedka ay ku soo badanayeen weerarada ku salaysan islaam nacaybka isla markaana lala beegsado goobaha cibaadada, ayaa gelinkii dambe ee maanta Nin ku hubeysnaa qoryaha sida daran dooriga u dhaca waxa uu weerar ku qaaday Masjidka Al-Nuur Islamic Senter oo ku yaala Xaafadda Bærum isla mar ahaantaana 15-daqiiqo u jirta magaalada Oslo ee dalka ...
Maamulka Somalibile Online oo Ummadda Soomaaliyeed ugu hambalyeynaya Ciidul-Adxaa
Maamulka iyo howlwadeenadda kala duwan ee shabakadda caalamiga ah ee Somalibile.com ayaa hambalyo ku aadan farxada Ciidul Adxaa u diray dhamaan dadka Islaamka ah meel walbo oo ay joogaan si gaar ahaaneed Ummadda Soomaaliyeed maadaama beri ay ku beegan tahay maalinta koowaad ee Ciidul Adxaa. Guud ahaan Umadda Islaamka oo ku kala sugan dalalka Caalamka iyo Gobolada dalka ayaa si ...
Geedi “Dowladda way ka gaabisay maqaamkii gobolka Banaadir uu mudnaa…”.
Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Prof: Cali Maxamed Geedi ayaa ku eedeeyey dowladda federaalka ah ee Soomaaliya inay ka gaabisay maqaamkii gobolka Banaadir, isagoo dhinaca kale arrin lagu xumaado ku tilmaamay burburinta dowladda ay ku wado maamul goboleedyada dalka. Prof: Cali Maxamed Geedi ayaa sidoo kale sheegay in dhibaatooyin fara badan laga soo maray dhisida maamul goboleedyada dalka, intii la ...
Maamulka Ahlusunna oo wariye ku xiray magaalada Dhuusa-mareeb.
Wararka naga soo gaaraya Magaalada Dhuusamareeb ayaa waxa ay sheegayaan in Ururka Ahlusunna ay ku xireen Magaalada Dhuusa-mareeb Wariye Maxamed Cabdiweli Tooxow oo ka mid ah Wariyeyaasha ka howlgalla halkaasi. Sidda ay Risaala u xaqiijiyeen Qaar ka mid ah Wariyeyaasha Magaalada Ururka Ahlusunna ayaa ku eedeeyay Wariye Tooxow in warar uusan hubsan uu ku baahiyay bartiisa Facebook. Wariyaha ayaa ku ...
Xil: Mahad Salaad oo hay’adaha Amniga ku dhaliilay jawaabta qabyada qaraxii ka dhacay xarunta dowladda hoose.
Xildhibaan Mahad Salaad oo ka mid ah Xildhibaannada Golaha Shacabka ayaa ilaa 9 Su’aalood ka keenay qaraxaas iyo jawaabtii ay ka bixisay Wasaaradda Arrimaha Gudaha Soomaaliya, isaga oo dhaliilay Hay’adaha Amniga Soomaaliya. Hoos Ka Akhriso Warbixin uu Bartiisa Facebook kusoo qoray Xildhibaan Mahad Salaad. Wasaarada Amniga shalay waxay soo saartay warbixin aan wax nuxur ah lahayn, dhammaystirnayn, kana jawaabayn su’aalo ...